FANAMBIN’NY FILOHA : Hovitaina tahaka ny endriny tany aloha ny Rovan’Antananarivo
Tratra mialoha ny 26 jona 2020 izay hankalazana ny fetin’ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovan-tena, ny hamerenana toy ny tamin’ny endriny teo aloha ny Rovan’Antananarivo. 15 mai 2020
Tsy maintsy hisy kosa ireo pitsopitsom-panavaozana hatao hitoviany endrika amin’ireny tranom-bakoka any ivelany ireny anefa.
Mandroso ny asa fanarenana ny Rovan’Antananarivo. Nidina ifotony tonga nijery ny fizotran’ny asa teny amin’ny Rovan’Antananarivo sy ny Rovan’i Manjakamiadana ny Filoha Andry Rajoelina niaraka tamin’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriantongarivo. Fampanantenana nataon’ny Filoha ny hamerina amin’ny laoniny indray ny hasin’ity vakoka lehibe mampiavaka an’i Madagasikara ity. Fanamby nataony no hahavitan’ny asa fanarenana mialoha ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovan-tena.
Raha ny fizotry ny asa dia ho tratra ny tanjona napetraka. Vita ara-potoana ny fanarenana natao satria nandritra ny fitsidihana nataon’ny Filoha teny an-toerana dia efa hirosoana ny dingana ho amin’ny famaranana tanteraka ny asa. Amin’ny ankapobeny, efa voapetaka ny valindrihana amin’ireo rihana telo, efa vita ny fametahana ny gorodona sy ny fandalorana ny rindrina. Tao anatin’ny 11 volana monja no nanenjehana nanaovana ny fanamboarana raha toa ka asa tokony hatao ao anatin’ny telo taona.
Araka ny baiko nomen’ny Filoham-pirenena dia averina amin’ny endriny teo aloha ny vakoka saingy hampiasa fitaovana maoderina ireo teknisianina, hatao manaraka ny fenitra eoropeanina toa an’ireo lapa fampirantiana vakoka any ivelany. « Ezahina hatao mitovy amin’ny endriny tany aloha mihitsy ity Rova ity, izany hoe na ireo mandrakotra ny rindrina na ny gorodona na ireo pitsopitsony rehetra, na ireo vakoka rehetra tao dia averintsika sy hampiainina ny Malagasy avokoa. Ankoatra izay, any amin’ny rihana fahatelo dia ezahintsika ihany koa ny mampiasa ny teknolojia vaovao, izany hoe misy ireo tantara sy teny nasehon’ireo mpanjaka taloha hampiainana ny tanora. Tsy hitsidika ny lapa fotsiny isika rehefa tonga ato fa ho hita ao ihany koa ireo teny izay nanamarika an’ Andrianampoinimerina, Ravanalona sy ireo mpanjaka rehetra nifandimby », hoy ny Filoha Andry Rajoelina.
Hamerina ny hambompom-pirenena
Ho vavolombelon’ny tantara ny fahavitan’ny Rova fonenan’Andriamanjaka ary ho mariky ny hambompom-pirenena sy fitiavan-tanindrazana. Antony ihany koa izany nanatrarana ny fahavitan’ny asa mialoha ny 26 jona 2020, araka ny fanazavana hatrany. Hanana ny maha izy azy tanteraka eo amin’ny lafiny ara-tantara amin’izay i Madagasikara amin’ny fahavitan’ity rova ity. « Hita fa efa mandroso ny asa fanarenana ny Rova na dia tsy mora aza satria io dia asa tokony ho natao farafahakeliny ao anatin’ny telo taona fa isika nanao fanamby fa tsy maintsy hovitaintsika ao anatin’ny fotoana fohy, ao anatin’ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny niverenan’ny fahaleovan-tena mba hampiverina indray ny hambompom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana, indrindra ny fahafantarana ny tantaran’i Madagasikara », hoy hatrany ny Filoha.
Marihina fa voakasiky ny asa fanamboarana avokoa na ny anatiny na ny ivelan’ny Rova. Ho an’ny ety ivelany dia atsangana ny kianja Masoandro izay tena mamelo-maso ny Kolontsaina Malagasy. « Nanapa-kevitra izahay hoe, asiana kianja Masoandro eto. Ny zavatra hatao dia karazana fampiainana ny tantara izay hafatra napetrak’ireo mpanjaka nifandimby. Betsaka ny zavatra sy ny fanavaozana hoentina ao anatin’ity lapa ity », araka ny fanazavana noentin’ny Filoha Andry Rajoelina.